Ama-Smartphones anesikrini esingu-6-intshi | Izindaba zamagajethi
Ama-Smartphones ama-5 anesikrini esingu-6-intshi esizokwenza uthandane
Ama-smartphones okuqala afika emakethe eminyakeni eyedlule asinikeza izikrini zamasentimitha ambalwa, okuyiqiniso ngaleso sikhathi esasijabule kakhulu futhi sasijabule ngokuphelele. Noma kunjalo Ngokuhamba kwesikhathi, ubukhulu besikrini samatheminali ethu bakhule baba ngamasentimitha ayisithuphaYize namuhla kungewona usayizi ovame kakhulu, kufanele sikubeke phakathi kwama-intshi ama-5 noma ama-5,5.
Namuhla kunamadivayisi amaningi eselula emakethe afaka isikrini esingu-6-intshi futhi abasebenzisi abaningi ngokwengeziwe bathambekele ekutholeni lolu hlobo lwedivayisi, noma ngabe lubonakala lukhulu futhi lungenamsebenzi kangakanani. Futhi ngukuthi njengoba kufanele uphathe i-terminal enkulu, akunandaba ukuthi ngabe inkudlwana nokuthi inesikrini esikhulu esivumela ukuthi sisebenzise inzuzo enkulu yedivayisi yethu.
Uma ucabanga ukuthenga i-smartphone, noma i-phablet ukuze ukhulume kahle ngokuphelele, ngesikrini esingu-6-intshi, hlola lolu hlu ngokucophelela ngoba ungakuthola okudingayo.
2 I-Huawei ikhuphuka Mate Mate 7
3 I-Sony Xperia C5 Ultra
4 I-LG G Flex
5 I-Nokia Lumia 1520
6 Inketho yesikrini esingu-5,7 intshi
El Nexus 6 Ilungu lakamuva lomndeni wakwaGoogle, elithe yize lingazange litholakale kahle emakethe ngenxa yobukhulu balo, kodwa ngaphezu kwakho konke ngenxa yentengo yalo enyuke kakhulu uma iqhathaniswa neNexus 5, iyi-terminal yabambalwa ngaphezulu kunezici ezithokozisayo ezihlangabezana futhi nesisekelo sokuba nesikrini esingu-6-intshi.
Intengo yayo ayiseyona inkinga namuhla njengoba yehliswe kakhulu selokhu yethulwa nangaphambi kokubonakala okungaphezulu kokusemandleni emakethe kungekudala madivayisi amasha we-Nexus.
Lapha sikukhombisa ifayili le- izici eziyinhloko nokucaciswa kwale Nexus 6;
Ubukhulu: 82,98 x 159,26 x 10,06 mm
Isisindo: 184 amagremu
Isikrini: AMOLED 2K wamasentimitha angu-5,96 ngokuvikeleka kweGorilla Glass kanye nesinqumo samaphikseli angama-1440 x 2560. Iphikiseli yayo ingu-493 kanti isilinganiso sayo ngu-16: 9
Iprosesa: I-Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Quadcore ku-2,7 Ghz (28nm HPm)
Inkumbulo ye-RAM: 3 GB
Isitoreji sangaphakathi: 32 noma 64GB ngaphandle kwayo okunganwetshwa ngekhadi le-MicroSD
Ikhamera engemuva: 13 mpx (Sony IMX214 sensor) f / 2.0 ene-Autofocus, Dual LED ring flash kanye ne-optical image stabilizer
Ikhamera yangaphambili: 2 megapixels / HD video conferencing
Ibhethri: 3220 mAh engasuseki futhi esinikeza ithuba lokushaja kwe-ultra-fast and wireless
Uhlelo lokusebenza: I-Android 5.0 Lollipop
Akungabazeki ukuthi sibhekene ne-terminal engaphansi kohlobo olubizwa nge-high-end range futhi mhlawumbe ne-phablet enhle kakhulu emakethe enesikrini esingu-6-intshi.
Ungathenga le Google Nexus 6 nge-Amazon kusuka ku- LAPHA.
I-Huawei ikhuphuka Mate Mate 7
El I-Huawei ikhuphuka Mate Mate 7 Akungabazeki ukuthi ibingelinye lamadivayisi asebenze uHuawei waba ngomunye wabakhiqizi abahamba phambili emakethe futhi nezibalo zokuthengisa eziqhubeka zikhula ngesivinini sokutatazela. Futhi ukuthi le phablet evela kumkhiqizi waseChina inokwakheka kwe-premium, izici ezinamandla nokucaciswa futhi nenani elingaphezu kokwehlisiwe ledivayisi esikhuluma ngayo.
Okokuqala, sizobuyekeza ifayela le- izici eziyinhloko nokucaciswa kweHuawei Ascend Mate 7:
Ubukhulu: 157 x 81 x 7.9 mm
Isisindo: 185 amagremu
Iprosesa yaseKirin 925 OctaCore neMali-T628 GPU
Isikrini esingu-6-intshi ngesinqumo se-FullHD
16GB noma 32GB wesitoreji ngokuya ngenguqulo esiyikhethayo
Ikhamera yangemuva ye-13-megapixel F2.0 nekhamera yangaphambili ye-5-megapixel
Isistimu yokusebenza ye-Android 4.4.4 KitKat enezendlalelo zokwenza ngokwezifiso zeHuawei, i-Emotion UI
Ngaphezu kwale nguqulo ye-Mate 7 lapho sibuyekeze khona izici nokucaciswa, kunabanye abaningi abanememori enkulu ye-RAM futhi abanesitoreji esiningi eza ukukhombisa nokukhuluma kahle kakhulu ngalesi siqhwaga esikhulu saseChina.
Ungathenga le Huawei Ascend Mate 7 nge-Amazon kusuka LAPHA.
I-Sony Xperia C5 Ultra
El I-Sony Xperia C5 I-Ultra ayikafiki ngisho nasemakethe okwamanje, kepha abaningi sebevele baveze ukuthi ingaba yindawo yokugcina emakethe enesikrini esingu-6-intshi, ngokwakhiwa kwayo, ngezici zayo nangekhamera yayo ehlaba umxhwele ezosinika ithuba lokuthatha izithombe ezisezingeni eliphakeme.
Lezi yizo Izici eziphambili nokucaciswa kwe-Sony Xperia C5 Ultra;
Ubukhulu: 164.2 x 79.6 x 8.2 mm
Isisindo: 187 amagremu
Isibonisi esingu-6-intshi IPS Full HD, iBRAVIA Engine 2
Iprosesa ye-Octa-core Mediatek MTK6752 1,7GHz
IMali 760MP2 GPU
I-2930 mAh, imodi ye-Stamina Ultra.
I-16GB yesitoreji iyanwetshwa nge-microSD efinyelela ku-200GB
Ikhamera yangemuva ye-13MP ene-autofocus, i-LED Flash, i-stabilizer, i-108op video, i-HDR
Ikhamera yangaphambili ye-13MP ene-selfie flash, i-HDR, i-engeli ebanzi engama-22mm
Uhlelo lokusebenza lwe-Android 5.0 Lollipop
Uma uthanda futhi uqinisekile ngale Xperia C5 Ultra okwamanje kufanele siyilinde ize ifike emakethe, okuzokwenzeka maduzane futhi silungiselele idlanzana lama-euro ngoba sinokuningi ukuthi lesi siginali esisha sakwaSony sizoba sincane kakhulu ngokunokwenzeka.
I-LG G Flex
Yize idivayisi yeselula engamasentimitha angu-6 iya ngokuya ivama kakhulu, kuseseyinto exakile emakethe yamaselula, kepha kungamangaza kakhulu uma, ngaphezu kokufaka isikrini esikhulu lokhu kujika kancane njengoba kwenzeka ku I-LG G Flex.
Okokuqala, ngaphambi kokuqala ukukhuluma ngale smartphone eyingqayizivele, sifuna ukucacisa ukuthi sihlale ne-LG G Flex enguqulweni yayo yokuqala hhayi kweyesibili ebitholakala emakethe isikhathi eside, ngoba isihenqo esingamasentimitha ayisithupha. I-LG G Flex ifaka isikrini esingu-6-intshi.
Lapho konke ukungabaza sekusuliwe, sizobuyekeza izici ezisemqoka kanye nokucaciswa kwe-LG G Flez, i-phablet enesikrini esingu-6-intshi nokunye okunye okukhethekile;
Ubukhulu: 160.5 x 81.6 x 7.9 / 8.7 mm
Isisindo: 177 amagremu
Isibonisi esingu-6 intshi esingu-POLED esinokulungiswa kwamaphikseli ayi-1280 x 720
Iprosesa yeQualcomm Snapdragon 800, i-2.2 GHz quad-core
Imemori ye-2 GB RAM
Isitoreji sangaphakathi esingu-32 GB ngaphandle kokunwetshwa ngekhadi le-MicroSD
Ikhamera yangemuva engama-megapixel angama-13 nekhamera yangaphambili engu-2.1 megapixel
3.500 mAh ibhethri
Uhlelo lokusebenza lwe-Android 4.2.2
Ukubuyekeza imininingwane, umuntu angabona kahle ukuthi sibhekene ne-terminal okuthi, yize ibisemakethe isikhashana, iqhubeke nokukala nokufeza umbono wokuba nesikrini esingu-6-intshi. Ngaphezu kwalokho, ukugobeka kwedivayisi kusinikeza amathuba amaningi futhi, ngokusho kwe-LG uqobo, induduzo enkulu lapho uyiphatha.
Uma ufuna ukuba ne-smartphone engu-6 intshi ehluke ngokuphelele cishe kuyo yonke into, le LG G Flex ingaba yindlela enhle ngentengo engaphezu kokuthakazelisa.
Ungayithenga le LG G Flex nge-Amazon kusuka ku- LAPHA.
I-Nokia Lumia 1520
Ekugcineni, besifuna ukufaka kulolu hlu idivayisi yeselula enesikrini esingu-6-intshi esizoba nesistimu yokusebenza ye-Microsoft Windows Phone. Ngenxa yalokhu bekufanele sikophule lokhu I-Nokia Lumia 1520 ebilokhu imakethe kusukela ngasekupheleni konyaka we-2013. Impela inkampani ezinze eRedmond maduze izokwethula ama-terminals amasha, ne-Window s10 ngaphakathi futhi impela isibuko esikhulu.
Ngezansi sikunikeza izici eziyinhloko nokucaciswa kwale Nokia Lumia 1520;
Isikrini esingamayintshi ayisithupha esinobuchwepheshe obugcwele be-HD, ukuminyana kwephikseli okungama-367PPI nesinqumo esifinyelela kumaphikseli angama-1920 x 1080
Iprosesa ye-Qualcomm Snapdragon 800
Ikhamera engemuva ehlanganisa inzwa engama-megapixel angama-20 nobuchwepheshe bePureView
Inkumbulo yangaphakathi engama-32 noma engama-64 GB iyanwetshwa ngekhadi le-MicroSD
I-Windows Phone 8
Ukuhlanganiswa ne-Microsoft Office
Inketho yesikrini esingu-5,7 intshi
Impela iningi lenu elifike lafunda kuleli qophelo lizibuze ukuthi kungani sithathe isinqumo sokwenza uhlu lwama-smartphones ngesikrini esingu-6-intshi hhayi i-5.7. Impendulo elula ukuthi yize sazi ukuthi amadivayisi amaningi, abizwa ngokuthi ama-phablets, akhweza isikrini esingu-5,7-intshi, besifuna ukukunikeza lolu hlu ngamadivayisi angama-intshi angu-6 ukuze sikwazi ukubona amatheminali ayisilingi emakethe ngokwemigomo ngosayizi wesikrini.
Kunjalo Ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo sizokunikeza uhlu, olukhulu kakhulu kunalolu, ngamatheminali esikrini angu-5,7 atholakala emakethe Futhi lokho okuningi kungaba yindlela engcono kunama-smartphone esiwabonile namuhla, yize kuyiqiniso futhi ukuthi intengo yabo iyenyuka ezimeni eziningi.
Njengoba ngithanda ukusho, lolu uhlu lwami lwamadivayisi eselula anesikrini esingu-6-intshi, kepha manje ngithanda ukwazi umbono wakho ngamatheminali engiwafakile futhi ikakhulukazi ukuthi ubeke amazwana esikhaleni esibekelwe ukuphawula kwalokhu okuthunyelwe noma ngokusebenzisa amanye amanethiwekhi wokuxhumana nabantu lapho sikhona uma ngikhohliwe ukufaka i-terminal okufanele ngokubona kwakho ibe kulolu hlu. Vele, akekho umuntu okufanele akhohlwe ukuthi sikhuluma ngamatheminali anezikrini ezingama-6-intshi hhayi u-6.1 noma u-5.7.
Ingabe unayo, ngabe uke waba nayo noma ungathanda ukuba nedivayisi yeselula enesikrini esingu-6 intshi?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ama-Smartphones ama-5 anesikrini esingu-6-intshi esizokwenza uthandane
UFernando Diaz kusho
Unyaka nohhafu nge-Lumia 1520, ivuselelwe ngokuphelele ngohlelo olusebenzayo lwakamuva. Isivele isebenza ngokubabazekayo Windows 10 Iselula kunguqulo yesilingo (yize inamaphutha athile okwamanje). Ikhamera ebabazekayo, isoftware yekhamera ehamba phambili, ibhethri elihle kakhulu, ukushaja okungenantambo, isibuko esimnyama se-clearblack, inkinobho yekhamera nokuklanywa kwayo okuphuzi okumangazayo okunesikrini esimnyama se-matte. Ucingo olungcono kakhulu engake ngaba nalo futhi angikatholi lutho oluzongenza ngilishintshe ngoba lingcono kune-iPhone 6 plus futhi lilingana ne-Galaxy Note 4 kodwa uhhafu wentengo. Ngithandana ne-lumia yami
Phendula uFernando Díaz
UMarco Argandoña kusho
Umlingani we-Huawey 7. Ithimba elikhulu. Izinsuku ezi-2 zempilo yebhethri. Inzwa engcono kakhulu yeminwe emakethe. Isikhumba kakhulu. Insimbi. Ukubukeka kwe-premium yangempela. Iprosesa eyinhloko ye-Octa. Isikrini esigcwele se-hd esingu-1920 × 1080. 4100mah ibhethri. I-Micro sd efinyelela ku-128g. Ayinakuphikwa,
Phendula uMarco Argandoña
Sivivinye amakhadibhodi weqiniso we-AT & T
Izeluleko eziyi-10 zokonga impilo yebhethri ku-Apple Watch yakho